2 investors would also want to invest in mining activities in the country.As said earlier, zimbabwe boasts of a huge and highly diversified mineral resource base dominated by prominent geological features, namely, an expansive craton, widespread greenstone belts also known as gold belts, the famous great dyke, precambrian and karoo basins and metamorphic belts, according to government.
Foreign investors expected for harare mining indaba.22-2-2018international investors will get a chance to consider the vast investment opportunities in zimbabwes growing mining sector at a mining indaba to be held from 27 to 28 february 2018 at the meikles hotel in harare.The conference is.
How Can I Get Investors To Invest In My Gold Mines
The zimbabwe diaspora investment group limited zidig, a private equity investment consortium launched by zimbabweans based in the uk at the beginning of the year, will lead an investment mission of diaspora investors to zimbabwe in january 2018.The zimbabwe diaspora trade and investment mission, december 4, 2017 no comment read more.
Looking for gold mining investors.Insight into the gold mining opportunities in zimbabwe.Mar 04, 2014 183 at its peak, zimbabwe produced 29 tonnes of gold in 1999 compared to less than 10 tonnes in 2010.This reflects just how many investment opportunities can be found in gold mining in zimbabwe.With proper investment, the mining opportunities in zimbabwe are endless.
Com offers 73 looking for mining investors products.About 13 of these are steel sheets, 1 are nickel, and 6 are other ore.A wide variety of looking for mining investors options are available to you, such as technique, type, and standard.
Looking for investors to fund gold mining projects in zimbabwe.We can even start from small scale operations with minimum capital investment.Investors willing to partner please get in touch with.